Noho ireo renim-pianakaviana miteraka any amin’ny Renin-jaza na any an-trano no mahatonga izany raha eo ihany koa ny hasarotan’ny fiainana sy ny tahotra ny hanatona biraom-panjakana. Manoloana io tranga io dia nandray fanapahan-kevitra ny Boriborintany voalohany sy ny fikambanana iray tarihin’ny delege Razafimbelo Harinosy Jacques fa handray an-tanana azy ireo. Ankizy latsaky ny 14 taona miisa 800 no kasain’izy ireo hozaraina kopia mari-pahaterahana maimaim-poana eto an-drenivohitra, tsy misy vola aloha ka anisan’izany ireo ankizy monina eny La Réunion kely sy ireo zanaky ny sahirana. Ankoatra izay dia hijery ireo mpivady mbola tsy nisora-panambadiana ihany koa ny Boriborintany voalohany, hetsika kasaina hotanterahina mialohan’ny fetin’ny 26 Jona ho avy izao. Ho an’ity farany manokana dia fantatra fa efa mandeha eny anivon’ny Fokontany ny fisoratana anarana amin’izao fotoana izao.